तेरी मेरी कहानीमा शाहिद प्रियंका ६० को दशकको गेटअपमा
Wednesday, 30 May 2012 10:29	नागरिक
मुम्बई, जेठ १७ (एजेन्सी) - शाहिद कपुर र प्रियंका चोपडाको आउँदो फिल्म तेरी मेरी कहानीलाई शाहिदले सन् १९६० को कथा भएको बताएका छन्। त्यतिखेर संघर्ष गरिरहेका एक संगीतकारको भूमिकामा उनी देखिनेछन्। उनले फिल्म त्यतिखेरका चर्चित कलाकारहरु देव आनन्द, राज कपुर र दिलिप कुमारबाट प्रेरित रहेको बताए।
पुनम पाण्डेको कपडा जोगाउन आवश्यक छ ?
Tuesday, 29 May 2012 14:01	राजेन्द्र ज्ञवाली
मुम्बई, जेठ १६ (एजेन्सी)- 'स्ट्रिपिङ गर्ल' र 'सेक्सी सायरन' को नामले प्रख्यात् मोडल पुनम पाण्डे चर्चित हुनका लागि नयाँ नयाँ उपाय अपनाउने गर्छिन्। उनको नग्न तथा उत्तेजक तस्बिर भिडिओ र इन्टरनेट जगतमा छ्यापछ्याप्ती पाइने गर्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा प्रश्न खडा भएको छ- पुनम पाण्डेको यस किसिमको स्वच्छन्दता नियन्त्रण गर्न जरुरी छ कि छैन? अर्थात् उनको कपडा जोगाउन आवश्यक छ कि छैन ? पुनमले पछिल्लो पटक टि्वटरमा आफ्नो नग्न तस्बिरलाई लाइक गर्ने प्रशंसकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेकी छिन्। यतिमात्र होइन, उनले न्युड तस्बिर त एउटा ट्रेलर मात्र भएको र असली सिनेमा त सुरु हुन अझ बाँकी नै भएको बताएकी छिन्। अर्थात आउँदा दिनमा उनी आफ्ना प्रशंसकका लागि अझ तात्तातो मासला पस्कने तयारीमा छिन्। यस्तो अवस्थामा पुनमले अश्लिलतालाई खुलारुपमा फिँजाइरहेकी त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
हमालले देखेनन् दाहालको जोश
Tuesday, 29 May 2012 11:48	नागरिक
सन्तोष रिमाल, काठमाडौं, जेठ १६ -'अरू कुरामा त होइन। तपाईको छोराले सगरमाथा चढेकोमा चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु,' राष्ट्रपति निवासमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित चियापान समारोहमा अभिनेता राजेश हमालले यसो भन्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुस्कुराए। पहिलोपटक जम्काभेट भएका हमालले दाहालको 'फेसियल एक्सप्रेसन' टेलिभिजनमा देखेको जस्तो जोशिलो पाएनन्।
डाक्टरले गाली गर्न सक्छन्
Sunday, 29 April 2012 12:11	नागरिक
बसन्त बस्नेत, काठमाडौं, वैशाख १७- नेपालमा बिरामीसँग चिकित्सक कस्तो व्यवहार गर्छन्? सभासद गगन थापाले चिकित्सक सरोज धिताललाई उद्धृत गर्दै शनिबार राजधानीमा सुनाए, 'सामन्तको जस्तो।'
चिकित्सकका लापरबाही र गलत प्रेस्त्रि्कप्सनको शिकार सर्वसाधारणमात्र होइन, स्वयं चिकित्सक र तिनका परिवारसमेत भइरहेका छन्। चिकित्सक रामेश कोइरालाले शनिबार विमोचित आफ्नो पुस्तक 'आमाको मुटु'बारे यही यथार्थ खोले।
विमोचनमा वितरण होइन बिक्री
Sunday, 29 April 2012 11:46	नागरिक
सन्तोष रिमाल, काठमाडौं, वैशाख १७- आफ्नो उपन्यास 'लू'को विमोचन डेढ सय जना अटाउने हलमा आयोजना गरेका थिए लेखक नयनराज पाण्डेले। त्यही समारोहमा तीन सय थान किताबमा हास्ताक्षर गरेपछि उनलाई लाग्यो, 'सोचे भन्दा तेब्बर मान्छे आएछन्।' विमोचनमै त्यत्रो किताब बिकेको पहिलो अनुभवपछि उनको उत्साह बढेको छ।
शुक्रबार पुस्तकको नयाँ संस्करण आएको जानकारी दिँदै उनले 'पठन संस्कृति र त्यसमा पनि आख्यानमा युवा पुस्ताको रुचि बढेको' बताए। पुस्तकका पारखीले विमोचनमै किनिदिएपछि प्रचारप्रसारमा सहयोग पुगेको उनले ठानेका छन्।